Firenena an’ny rehetra, fety ho an’ny rehetra | NewsMada
Firenena an’ny rehetra, fety ho an’ny rehetra
59 taona amin’ity izao no nisy ny fankalazana ny fetin’ny Fahaleovantena. Fetim-pirenena, midika ho fetin’ny Malagasy tsivakivolo. Tsy misy vanim-potoana lehibe mihoatra no ho ny 26 jona taloha, ary tsy nisy naningana tsy te hankalaza izany. Tsy fetin’ny mpanohana, tsy fetin’ny antoko eo amin’ny fitondrana, indrindra tsy fetin’ny mpitondra fanjakana irery izany.
Nandritra ny taona maromaro anefa izay, toa lasa nolalaovina amin’ny tsy fifankahazoana ara-politika ny fetim-pirenena. Noho ny tsy fitiavana izay mpitondra eo no hanaovana fanentanana tsy hanangan-tsaina isan-tokantrano, sy tsy hifety rehefa 26 jona… Nisy izany tamin’ny fitondrana Ravalomanana. Nodimbiasina tamin’ny fitondrana Tetezamita. Nitohy tamin’ny nitondran-dRajaonarimampianina ary mbola hita sy tsapa amin’izao fitondrana Rajoelina izao.
Satria ve tsy mitovy fironana ara-politika amin’ny mpitondra, dia tsy hanangan-tsaina ho mariky ny fankalazana ny fetim-pirenena? Dia hiandry rahoviana sy ny mpitondra iza izany? Tsy vao mainka aza ve fotoana hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny vanim-potoana toa izao?
Tsy takona afenina, efa mampisara-bazana ny politika. Manampy trotraka izany koa ny resaka finoana sy fivavahana. Niraisan’ny Malagasy kosa ny fankalazana ny fiverenan’ny fahaleovantena, izay noraisina ho fetim-pirenena, ka tsy tokony holalaovina amin’izay ady politika. Irariana mba tsy hisy fanakorontanan-tsaina na sanatria gafy hahitan-doza toa ny efa nisy taloha ny amin’ity…
Les photos du 05 Juin 2020 05/06/2020
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny fanajana ny fepetra ihany no ahafahana manalefaka azy miandalana 05/06/2020
Billet: déconfinement, occasion manquée 05/06/2020
Madagascar il y a 100 ans 05/06/2020
Chronique: balle au centre 05/06/2020